Izici Ezi-8 Zomkhiqizo Omuhle ka "V" | Martech Zone
UMsombuluko, May 18, 2020 NgoLwesine, Februwari 25, 2021 Douglas Karr
Sekuyiminyaka ngijwayela uku poo-poo umqondo wokubeka uphawu kophawu. Isixuku sabantu abathintekayo abanenhlonipho abaphikisana ngombala oluhlaza ku-logo sibonakala siyisidina kimi. Kanjalo nethegi lentengo lama-ejensi wokubeka uphawu abiza amashumi noma ngisho namakhulu ezinkulungwane zamaRandi.
Isizinda sami sikubunjiniyela. Ukuphela kwekhodi yombala engangiyikhathalela kwakuwukufaka intambo ndawonye. Umsebenzi wami kwakuwukuxazulula inkinga okwakonakele bese ngiyakulungisa. I-logic kanye ne-troubleshooting kwakuyikhono lami - futhi ngakuthatha lokho kwamaketha e-database futhi ekugcineni kuwebhu. Izibalo kwakuyisikimu sami futhi ngavele ngabuyela emuva ezinkingeni ezazivimbela amakhasimende ekuthuthukiseni amazinga awo okuguqulwa.
Kule minyaka eyishumi edlule, ukuqonda kwami ​​nokwazisa ngokubeka uphawu kushintshe kakhulu. Ingxenye yenkinga ukuthi njengoba sasinenkinga yokubuyela emuva kumthombo wenkinga - sasivame ukukhomba izikhala emizameni yamakhasimende eku-inthanethi. Uma iklayenti lalinomkhiqizo oqinile nezwi, kwakumangaza ukuthi kwakulula kanjani kithi ukubamba ithoshi, sikhiqize okuqukethwe okumangazayo, futhi sikwenze konke kusebenze.
Uma iklayenti lingakaze lenze umsebenzi wokubeka uphawu, bekuhlala kubuhlungu ukuqonda ukuthi zinjani, zethulwa kanjani ku-inthanethi, nokuthi zakhiwa kanjani uphawu oluhlangene abantu abazoqala ukulubona futhi baluthembe. Ukubeka uphawu lokumaka yisisekelo sanoma imuphi umzamo wokumaketha… Ngiyakwazi lokho manje.
Njengoba ngangibheka kulawo maklayenti ayenophawu oluhle ngokwedlulele, ngabhala izici ezi-8 ezikhethekile engizikhombe kumkhiqizo wazo. Okokuzijabulisa, ngangifuna amagama abhalwe ukuthi “V” ukuxoxa ngalinye… ngethemba lokuthi lenza kube lula ukukhumbula.
Visual - Yilokhu abantu abaningi abacabanga ukuthi uhlobo lomkhiqizo luyikho. I-logo, uphawu, imibala, ukuthayipha, nesitayela sezimpahla ezibonakalayo ezihlotshaniswa nenkampani noma imikhiqizo nezinsizakalo zayo.
Voice - Ngaphandle kokubukwayo, njengoba sizulazula kumasu wokuqukethwe nezenhlalo, sidinga ukuqonda kangcono izwi lomkhiqizo. Lokho wukuthi, uthini umyalezo wethu futhi siwudlulisa kanjani ukuze abantu baqonde ukuthi singobani.
Vendee - Umkhiqizo awumeleli nje inkampani - futhi udala isibopho somzwelo nekhasimende. Ukhonza bani? Ingabe lokho kubonakala kwizibonisi zakho nasezwini lakho? I-coke, ngokwesibonelo, inokubukeka okuhle nezwi elijabulisayo. Kepha iRed Bull ikhishwe kakhulu futhi igxile kuzithameli zayo zabathandi bezemidlalo abanzima.
Izindawo eziseduze - Obani izimbangi ezikuzungezile? Ukuyiphi imboni? Izinkampani eziningi zisebenzela imboni ethile futhi zifakwa uphawu ngazo zombili ngokuhlukile kodwa futhi zihambisana nomkhakha kubaluleke kakhulu. Kukhona abaphazamisayo, ngokuqinisekile… kepha ingxenye enkulu, ufuna ukubonakala uthembekile futhi usebenza kahle kontanga yakho.
Ukushintsha - Futhi njengoba ungafuni ukubukeka futhi uzwakale njengontanga yakho, uzihlukanisa kanjani nabo? Yini eyakho Isiphakamiso Samanani Ahlukile? Okuthile kufanele kubonakale kulo mkhiqizo okubeka eceleni kubancintisana nabo.
Ubuhle - Akwanele kulezi zinsuku ukuthi ube mkhulu kulokho okwenzayo, futhi kufanele ube nekhwalithi enhle noma impahla ehambisana nomkhiqizo wakho. Mhlawumbe kuyinto elula njengokuthembeka - noma eyinkimbinkimbi ngokwengeziwe ekusebenzeleni kwakho umphakathi wendawo. Abantu bafuna ukwenza ibhizinisi nabantu okuthinta ushintsho - hhayi nje ukwenza inzuzo.
Value - Kungani lokhu kufanele ukukukhokhela umkhiqizo noma insiza yakho? Konke okuphathelene nomkhiqizo wakho kufanele kuqinisekise ukuthi inani lomsebenzi wakho lidlula izindleko zalo. Lokhu kungaba ngukuthuthuka kokusebenza kahle, ukwakha ukufunwa okukhulu, ukwehliswa kwezindleko, noma ezinye izinto. Kepha umkhiqizo wakho kufanele ubonise inani olilethayo kumakhasimende akho.
Ukuqina - Yiliphi igama elipholile, eh? Yini inkampani yakho enothando ngayo? Ukushisekela kufanele kube yisikhali esiyimfihlo kuyo yonke inqubo yokwenza uphawu ngoba i-vehemence iyathathelana. Ukukhathazeka kungumzwelo osusa abantu ezinyaweni zabo. Ingabe umkhiqizo wakho ulukhombisa kanjani uthando lwakho?
Hlala wazi, angiyena uchwepheshe wokubeka uphawu ... kepha sithatha lapho ochwepheshe bokubeka uphawu beyeka khona futhi sithole ukuthi kulula kakhulu ukuxazulula izingqinamba nokugcwalisa okuqukethwe okungenamsebenzi lapho siqonda, singafanisa, futhi sisho uphawu lwenkampani.
Uma ufuna ukufunda kabanzi ngokufaka uphawu, ngingancoma incwadi kaJosh Mile - IBold Brand. Ngempela ivule amehlo ami kwezinye izingqinamba ezibalulekile ebesinazo namakhasimende athile adonsa kanzima neminye imisebenzi ebesisebenza kuyo ngaphakathi.
Tags: izwi lomkhiqizoUkufaka uphawuumkhakhaInaniukuhlukahlukaumfuthoumthengisieduzeubuhlebrand ebonakalayoizwi lomkhiqizo
I-TinEye: Reverse Image Search